garland shell "masoandro" - Moi Mili
Home > garland "akorandriana" masoandro
garland "akorandriana" masoandro
Tongo-bolon-dranona rongony fito amin'ny loko miloko telo dia soso-kevitra voalohany avy amin'i Moi Mili. Miantehitra amin'ny kofehy vita amin'ny lamba vita amin'ny vakana hazo ny zavatra rehetra. Noho ny endriny sy ny endriny tsy manam-paharoa, dia hamporisika ny hilalaovana sy hanomezana fahafinaretana ny efitran'ny ankizy iray izany.
Moi Mili Garland dia karazana rindrina amin'ny haingon-trano, isaorana izay hahafahanao manao haingon-trano mora foana. Miisa dimy vita amin'ny akorandriaka vita amin'ny akorandriaka, miantona amin'ny kofehy vita amin'ny landihazo, ary koa voaravaka makasy hazo. Izy io dia ho tsara ho toy ny haingon-trano na famolavolana sehatra.
2,7 garland length length m.